खुशीको खबर: अष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली युवक ७ दिनमै निको भएर अस्पतालबाट फर्किए ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुशीको खबर: अष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली युवक ७ दिनमै निको भएर अस्पतालबाट फर्किए !
खुशीको खबर: अष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली युवक ७ दिनमै निको भएर अस्पतालबाट फर्किए !
अष्ट्रेलियाको तास्मानियामा को’रोनाबाट ग्र’सित एक नेपाली युवक सं’क्रमण देखिएको ७ दिनमै नि’को भएका छन् ।मार्च ७ तारिख शनिवार ती युवकमा को’रोना संक्रमणको पुष्टी भएको थियो । को’रोना संक्रमण ह’टेपछि सात दिन अस्पताल बसेर ती युवक अघिल्लो शनिवार मार्च १४ तारिखमै घर फर्किसकेका छन् । उनमा को’रोना सं’क्रमण देखिएको आउने शनिवार मात्र १४ दिन पुग्दैछ । को’रोनाको संक्रमण सामान्यतया १४ दिनसम्म रहने भएपनि नेपाली युवक भने एक सातामै घर फर्किनुलाई सुखद रुपमा हेरिएको छ ।
यूएईबाट आएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पाँच दिनसम्म लकडाउन थप गर्ने तयारी